टोपी दिवस नै किन चाहियो ? - TV Annapurna
टोपी दिवस नै किन चाहियो ?
January 3, 2017January 3, 2017 Annapurna TV	राजेशचन्द्र राजभण्डारी ।
कहि नभएको जात्रा हाडि गाउँमा भने झै अहिले नेपाली ढाका टोपी लगाउन पनि हामी नेपालीले टोपी दिबस कुर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले नेपालीले आफ्नो पहिचान भुल्दै गएपछि टोपी लगाउन पनि दिबस नै खोज्नुपर्ने भएको छ । अहिले नेपालीको मान र सानको रूपमा रहेको ढाका टोपी दिबस भनेर सरकारले घोषणा गरे पनि खासै नेपालीले बाहिर टोपी लगाएर हिडेको पनि देखिएन । जे जतिले लगाए त्यो सबै सामाजिक सञ्जालमा ।
पुस १७ को दिन नेपाली जनतालाई भ्याइनभ्याई थियो टोपी लगाएर फोटो खिच्नलाई महिला दिदिबहिनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको राम्रोसँग प्रयोग गरे अघिपछि नेपाली ढाका टोपी लगाएर हिड्दाखेरी टोपी लगाउने नेपालीलाई हिस्सि गर्ने चलन छ । कतिपय मान्छेको बुझाई त ढाका टोपी लगाउने पुर्ब पन्च हुन भन्ने छ ।
हामी नेपालीको सान र मानको रूपमा स्थापित ढाका टोपी लगाउन दिबस कुर्नुपर्ने किन? अघिपछि सधै लगाउने नीति बनाउन हामीलाई कसले रोकेको छ? हामी काम भन्दा पनि कुरा बढि गर्छौ एउटा ढाका टोपी लगाउन पनि दिबस नै कुर्छौ किन भन्दा हामीलाई नेपाली भन्दा पनि बिदेशी सस्कृतिले गाजि सकेको छ । हामी आधुनिकताको नाममा आफ्नो मौलिकता नेपाली सस्कृति भुल्दै गईरहेका छौं ।
नेपालमा २४० बर्ष पुरानो सामन्ति राजतन्त्रको अन्त्यगरी गणतन्त्र स्थापना भए पनि देशले खासै नयाँपनको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । सरकार प्रमुखदेखि अहिले भएका मन्त्रीहरू पनि बिचित्रका छन् । कसैलाई नेपाल र नेपालीको माया छैन कसरी सरकार टिक्ने अनि टन्न पैसा कमाउने भन्दा अरू ध्यान भएको पनि देखिदैन । यिनिहरूलाई नेपाली ढाका टोपीको कुनै चिन्ता छैन । टोपी दौरा सुरवाल र टोपी लगाए पन्च भनेर चिनिन्छ भन्ने डर छ ।
हो सबैभन्दा बढि दिबस मनाइने देश कुन हो भनेर कसैले प्रश्न शोधिहाले पनि यसको सहि उत्तर साना स्कुले नानिबाबुले पनि दिन सक्छन् । तर देशको लागि पहिचान दिने टोपीको बिषयमा भने सरकारको कुनै नीति छैन । अहिले सरकारी कार्यालय गैरसरकारी कार्यालयमा कार्यरत सबैले ढाकाको टोपी लगाउने नीति बनाउने हो भने हामीले टोपी दिबस मनाइ राख्नु पनि पर्दैन । पहिलो कुरा त टोपी लगाउने नीति भन्दा पनि मैले के को लागि टोपी लगाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अरूलाई देखाउनको लागि हो भने त्यो आबश्यक पनि छैन । प्रत्येक देशको आफ्नो पहिचान छ अहिले हामीले संघियताको कुरा गर्दा खेरी पहिचानको कुरा स्रोतको कुरा गर्छै तर ब्यबहारमा भने ठिक उल्टो भएको देखिन्छ ।
नेपालमा जतिसुकै प्रदेश बनोस त्यो प्रमुख कुरा होइन तर हामीले नेपाली पहिचान सस्कृति भुल्दै जाने, छोडदै जाने बिषय भने हैन । नेपाली ढाका टोपी कुनै जात जाति धर्म विशेष हैन तर अहिले आएर त्यसलाई नचाहिने हल्ला गरिदिएर ढाका टोपी लगाउदै आएका नेपाली दाजुभाइलाई निरूसाहित पार्ने अनि नयाँ पुस्तालाई समेत कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन । प्रत्येक दिन जानिजानि हामी माथि हाम्रो धर्म सस्कृति माथि प्रहार हँदै आएको छ, हामी पनि त्यसकै भागिदार बन्दै गईरहेका छौ । अहिले हामी कहाँ भएको लोकतन्त्र त भाडतन्त्र साबित हुदै गैरहेको छ । जसले जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने राजनीति पनि अचम्मको छ ।
संविधान सभाले संविधान बनाए पनि अहिले सम्म देशले निकास पाउन सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गते निर्वाचन गराउन नसके अहिलेसम्म भएको सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा कायमै छ । सहमति र सहकार्यको राजनीति भनेर कुरा गरे पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यो हुन सकेको छैन । हाम्रो नेताहरूलाई आफ्नै कुर्सी सम्हाल्न हम्मेहम्मे परेको छ । यिनीहरुलाई नेपाली ढाका टोपीको बारेमा सोच्न फुर्सद कहाँ हुनु अहिले राष्टवादको नारा चर्को रूपमा उठेपनि आफुलाई नेपाल कै एक नम्बरको नेताहरूले समेत ढाका टोपीको बारेमा खासै चिन्तन गरेको देखिदैन । सरकारले पनि यसलाई खाली औपचारिक रूपले मात्रै लिएको देखिन्छ । हुनत दिवसै दिवस को देश भएर पनि होला एक दिन दुई दिन बिराएर नेपालमा दिबस पर्ने गरेको कारणले पनि नेपाली टोपी दिवसले मह्त्व नपाएको होला ।
साच्चै हामी नेपालीको पहिचान भने कै नेपाली ढाका टोपी नै हो । हामी विदेश घुम्न जाँदा शिरमा ढाका टोपी लगायौ भने आफ्नो परिचय दिइरहनु पर्दैन । हाम्रो शिरमा लगाएको ढाका टोपीले नै नेपाल र नेपाली हो भन्ने परिचय दिन्छ । त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ तर हाम्रो ढाका टोपीलाई सबैले एक दिन लगाएर फोटो खिच्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा राखेर सबैलाई देखाउने कामलाई नराम्रो भन्न खोजेको हैन । यो हाम्रो ढाका टोपीलाई सधैं लगाउने बानी बसाल्नु पर्छ । फेसबुकबाट ढाका टोपी लगाउने अभियानलाई भने निरन्तरता दिनु जरुरी छ । हाम्रो समाजमा नियमित रूपमा ढाका टोपी लगाउने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ तर हामीले उहाँहरुलाई न त धन्यवाद दिन सकेका छौ न त उहाँहरुले जस्तो ढाका टोपी तपाईं हामीले पनि नियमित रूपमा लगाउने गरौ भन्ने अभियान नै चलाउन जरुरी छ ।
जसरी भारतमा रहेका पन्जाबिहरूले हिउँद होस कि बर्षा १२ महिना पगरी लगाउने गर्छन् त्यो उनीहरुको पहिचान हो जसलाई उनीहरुले भुलेका छैनन् । जहाँ गए पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सफल पनि भएका छन् । हामी नेपालीहरूले ढाका टोपी दिबस मनाउने सकारात्मक पक्ष हो तर यसलाई बर्षको एक दिन मात्रै मनाउनुको अर्थ छैन सरकारले नितिगत रूपमा मनाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जे कुरालाई पनि पुरानो सामन्ती सस्कृति भनेर आफ्नो भएको राम्रो कुरालाई छोड्दै जाने अनि बिदेशी प्रभुले भने अनुसार काम गतिविधि गर्दै जाने नेताहरूले गर्दा आज नेपालीहरूले ढाका टोपी लगाउन दिबस मनाउनु पर्ने अबस्था आएको छ । अब हामी नेपालीहरूले अरूलाई देखाउन हैन आफ्नो पहिचानको लागि सधैं ढाका टोपी लगाउने गरौ यसलार्इ अब अभियान नै बनाउन जरुरी छ । अब दिबसमा हैन ब्यबहारमै ढाका टोपी लगाउने गरौ ।
यसरी बेचियो जग्गाधनीले थाहै नपाई झण्डै ४ बिगाह जग्गाब्रुनाईका सुल्तान दुनियाँकै शौखिन, जो सुनको जहाजमा उड्छन्